फोटो पत्रकारले ‘ढलको पानी’ले मुख धुनुपरेको दिन
ब्लग फोटो पत्रकारले ‘ढलको पानी’ले मुख धुनुपरेको दिन जगत नेपाल
क्यामराम्यान श्याम श्रेष्ठले धेरै पटक भने – ‘‘खै सधैँ रिर्पोटरको डायरीमात्र आउँँछ । क्यामराम्यानको काम खिच्ने हो । लेख्ने होइन क्यारे । कहिले काहीँ त हाम्रो डायरी पनि लेखिदिनुस् न ! कमसे कम हाम्रा पनि दुःख पीडा अरुले थाहा पाउन् ।’’ लेख्छु, लेख्छु भनेर धेरैपटक आश्वासन दिएँ तर सन्दर्भ मिलेको थिएन ।
अहिले कोरोनाको महामारीले सिंगो विश्व आहत भएका बेला नेपाल पनि जोगिन सकेन । बन्दाबन्दी (लकडाउन)पछि सर्वाधिक दुःख पाउने वर्ग मजदुर भएको छ । सयांै किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नेहरुका दुःख पीडाका कथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् । खाना र पानी नपाएर सडक किनारमा अलपत्र लडेका, बन्दाबन्दीको पालना नगरेको भन्दै ठाउ“ठाउ“मा प्रहरीले तिनै निहत्थाको ढाडमा कटवास लगाएका तस्बिर र भिडियो सरकारले हेरेको छ कि छैन ? हेरेको भए पनि असहाय नागरिकहरुको पीडामा मलम लगाउने काम गरेन । सामान्य मानिस भने ती दृश्यबाट भक्कानिएका छन् ।
यसै प्रसंगमा श्याम दाइ (क्यामराम्यान) को डायरी लेख्न मन लाग्यो ।
राजधानीवासीले इराकमा नेपालीमाथि भएको बर्बर अत्याचारको विरोध सुरु गरे । तर अराजक प्रदर्शनको सिकार भए देशकै म्यानपावर कम्पनी । प्रदर्शनकारीले भेटे जति म्यानपावरमा धावा बोले । कम्प्युटर, सोफा, दराज र अफिसका बहुमूल्य सामान झ्यालबाट फाल्दै जलाउने अभियानमात्र चलाएनन्, म्यानपावरको अफिस भएका निजी घरसमेत उनीहरुको निसानामा परे । कामका लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यता भएका हजारौँ नेपालीका पासपोर्टसमेत जलाइए । जंगलमा डढेलो फैलिएझैँ काठमाडौं जल्न थाल्यो, जताततै अकाशमा धुवाको बादल थुप्रियो ।
आक्रोशित भीडले नारावाजी गर्दै सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमा पनि आक्रमण गरे । कान्तिपुर र स्पेसटाइममा ढुंगामुढा र आगजनी भयो ।
दिउँसो १२ बजेको समाचार बुलेटिन प्रसारण हुने समयमा कान्तिपुर टेलिभिजन कम्पलेक्सभित्र आगजनी भइरहेको थियो ।
हिजोआजजस्तो जहाँबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न मिल्ने प्रविधि यता प्रयोगमा आइसकेको थिएन । सामान्य अवस्थामा घटनास्थलबाट खिचिएका टेप स्टुडियो नपुर्‍याइ दृश्य देखाउन सम्भव थिएन ।
नेत्रहीनलाई डोर्‍याए झै श्यामलाई लिएर गयो ऊ ।
रत्नपार्कमा अहिले आकाशे पुल भएको ठाउँनिर बीच वाटामा सानो वाटिका थियो । त्यहीँ खाडलमा पानी जमेको देखे पछि केटाले भन्यो – ‘‘दाइ ल यहाँ पानी रहेछ । यसैले धुनुस् मुख ।’’
ठीक त्यति नै बेला श्यामको फोन बज्यो । प्रमुख क्यामराम्यान उपेन्द्रमान अत्तालिएर भन्दै थिए – ‘ए ... श्याम । कता हो ।’ एकाहोरो बोलिरहे ‘‘पूरै काठमाडौंमा टेन्स छ । पत्रकारलाई भेट्यो कि कुटिरहेका छन् । कान्तिपुर कम्पलेक्स जलाई सके । क्यामरा कतै लुकाएर आफू पनि लुक ।’’
देशभित्र गरिब निमुखा मजदुरको श्रम र खाडीलगायत बाहिरी मुलुकमा पसिना बगाउने युवाको कमाइले देश चलेको छ । तर, तिनै मजदुरको मानवीय संवेदनामाथि शासकहरु अमानवीय व्यवहार गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा कार्यान्वयन भयो भनेर युद्वस्तरमै प्रचार गरियो । पोलपोलमा ओलीको तस्बिरसहितका पोस्टर झुन्ड्याइए । ‘एउटा नया“ युगको सुरुआत : सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा’ को नारा पोल पोलमामात्र सीमित रहेन । दैनिक पत्रिकामा ज्याकेट विज्ञापन भएर आयो । पोष्टर टाँसेपछि सरकारले बाटो खनिदियो । उसको दायित्व सकियो । अरु आगे, यात्रा मजदुर आफैँले गर्ने हो ?